Analytics 15 နှိုင်းယှဉ် SiteCatalyst 10
တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 13, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Omniture နှင့် Webtrends တို့ကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့သင်ဒီ blog ကိုဖတ်ခဲ့ရင် Webtrends ဟာဖောက်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာများကိုဘက်လိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းအပြည့်အဝဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မူကွဲတစ်ခုစီအတွက်တီထွင်ထားသောအသုံးပြုသူအင်တာဖေ့စ်အသစ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုစဉ်းစားရန်အတွက်အစားအစာအချို့ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ငါမတိုင်မီကြောင်းအများဆုံးပြwithနာကပြောသည် analytics ပလက်ဖောင်းများမှာ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အစီရင်ခံစာများကိုပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအမြင်အာရုံဖော်ပြရန်စွမ်းရည်မရှိခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ.
ဤတွင်အတွက်နောက်ဆုံးတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ် Omniture SiteCatalyst ၁၅ သူတို့ရဲ့မကြာသေးမီကဗီဒီယိုမှတဆင့်ထပ်ဆင့်လွှင်အဖြစ်ထုတ်ကုန်။
Webtrends Analytics 10 သည်အလွန်အမင်းအလိုလိုသိနားလည်မှု၊ သန့်စင်ပြီးလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်သော UI အသစ်တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ UI သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်အမြင်အာရုံပေးသောကလစ်နှင့်ထိတွေ့နိုင်သောမျက်နှာပြင်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်သည်သင်ခြေရာခံနေသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း၏ပုံရိပ်ကိုဖော်ပြရန်သမ်းနေးလ်များကိုအသုံးပြုသည်။
Webtrends ကိုလည်းမိတ်ဆက်သည် spaces - နေရာဆိုသည်မှာသင်ခြေရာခံချင်သောမည်သည့် application၊ website သို့မဟုတ် platform ဥပမာမဆိုဖြစ်သည်။ သင်၏ Facebook စာမျက်နှာ၊ သင်၏ Android app စသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အလိုအလျောက်စုစည်းထားသောပရိုဖိုင်းနေရာများ။ Profil မ်ားသည် Webtrends တွင်ကြီးမားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုပရိုဖိုင်းများသည် Spaces နှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။
ဘယ်တော့လဲ ဂျွန် Lovett Preview ကိုမြင်တော့သူကအကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်တယ်။ “ ဒါဟာ Infographic နဲ့တူတယ်!” ငါထင်တာကဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုပြောပြတယ်။ Webtrends Analytics မှ 10 အစီရင်ခံခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ပြောင်းလဲလာပြီးယခုအခါကုမ္ပဏီများအားဆုံးဖြတ်ချက်များချစေနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအမြင်အာရုံဖြင့်ပြသနေသည်။
PPC အလိုအလျောက်: သော့ချက်စာလုံးများ Gone Wild
မတ်လ 13, 2011 မှာ 8: 14 pm တွင်
“ infographic ပုံရသည်” သည်ချီးမွမ်းစရာမဟုတ်ပါ။ 🙂
လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်ခန့်က stodgyiest (WT) သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော sexy တစ်ခုခုကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုမည်သူမှန်းဆခဲ့သည်။ တနည်းကား, "အမြင်အာရုံ sexy" သေချာပေါက်ချီးမွမ်းခြင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။
နားလည်မှု၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်ကျွန်ုပ်အနှစ်သက်ဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ အချိန်ကိုရှာတွေ့ရင်ငါလည်းအဲဒီလိုလုပ်မယ်။ Sooo အလုပ်များ
ခင်ဗျားရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေလို့နောက်တစ်ခုက Spaces ကိုနောက်ထပ် post တစ်ခုမှာသွားပြီးမင်းရဲ့တုန့်ပြန်မှုတွေကိုပေးချင်တာလား။ သို့မဟုတ် WebTrends မှထုတ်လွှင့်သောအရာတစ်ခုခုကိုထောက်ပြပါ။
ငါအလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသည်ဟုထင်ရသော်လည်းဝမ်းနည်းပါသည်၊ သို့သော်သင်၏ရေးသားချက်များနှင့်အခြားပံ့ပိုးမှုများသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ အကျိုးရှိသည်။
မတ်လ 14, 2011 မှာ 12: 46 AM
CGrant၊ ခင်ဗျားကတကယ့်ကိုစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတာပဲ။ Re: Infographic၊ ဘယ်နေရာကအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာသေချာမသိဘူး။ အင်ဖိုဂရပ်ဖစ်များသည်ရုပ်ပုံများဖြစ်ပြီးအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးထူးခြားစွာပြသသည့် 'ပုံပြင်' ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြပေးသည်။ အပေါ်ကပုံ ၂ ကိုကြည့်ပါ။ ဘယ်တစ်ခုကစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေပြီးထိုစာမျက်နှာနှင့်သက်ဆိုင်သောတုံ့ပြန်မှုကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
မတ်လ 14, 2011 မှာ 1: 11 AM
မှန်ပါသည်၊ အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏နောက်ခံအဓိပ္ပာယ်သည်ဇာတ်လမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောပြရန်ရည်ရွယ်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်ဤအသုံးအနှုန်းသည်ဆဲလ်အတွင်းရှိအရောင်များ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စကားလုံးတိမ်သို့မဟုတ်နှစ်လုံး၊ အမျိုးမျိုးသောဖောင့်အရွယ်အစားနှင့်အရောင်များပါ ၀ င်သည့်ရေကာတာတိုင်းကိုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်တစ်ခုလုံးရိုးရှင်းသောဇယားကွက်အတိုင်းမလိုက်နာပါ။
ယနေ့ခေတ်“ infographics” ဟုခေါ်သည့်လေဆာပရင်တာများကလူတိုင်းမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက်ကမ်းကြော်ငြာများကိုကလစ်အနုပညာနှင့်အရူးကဲ့သို့သောဒီဇိုင်းများစတင်ဖန်တီးသည့်အစောပိုင်းကာလကိုသတိရစေသည်။
မတ်လ 14, 2011 မှာ 10: 00 pm တွင်
ငါ cgrant နှင့်အတူသဘောတူသည်။ Webtrends သည်သူတို့၏“ ရိုးရှင်းသောဇယားများနှင့်အတိုင်းအတာများအတိုင်းအတာများ” ၏အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုအချိန်များစွာဖြုန်းတီးနေခဲ့သည်။ သူတို့ကနောက်ဆုံး interface (8 နဲ့ 9) နှစ်ခုစလုံးဟာ interface ကိုအဓိကထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့က visual interface ကို update လုပ်ဖို့အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်လို့သင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့ Webtrends 10 သည်ကြီးမားသော data exportation features (REST API, etc) ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုမှာ user-facing interface ဖြစ်သည်။
ဒီနောက်ဆုံးပေါ် Analytics 10 update ကပိုပြီး sexier ဖြစ်ပြီးမျှော်လင့်ခြင်းပိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Engage တွင်ဖော်ပြခဲ့သောနောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာစာမျက်နှာများရှိစာမျက်နှာတစ်ခုစီ၏သီးသန့် dashboard ကိုရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးအသုံးဝင်သင့်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ယခုအပတ် Omniture ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် Webtrends မတိုင်မီကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည့်ပြောင်းလဲမှုများအပေါ်အဓိကထားသည်။ ဗားရှင်း ၆? Back-end ပလက်ဖောင်းပြောင်းလဲမှုများ! SiteCatalyst6သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်နောက်ကွယ်မှအပြောင်းအလဲများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည် tool နှင့်အတူစွမ်းရည်အသစ်အမျိုးမျိုးအတွက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ Webtrends သည်သူတို့၏ထုတ်ယူခြင်းအင်ဂျင်ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်သည့်တိုင်အောင်သာအိပ်မက်နိုင်သည်။
ဤသော့သောအပြောင်းအလဲများအနက်မှတစ်ခု - Instant Segmentation ။ သေချာတာပေါ့၊ Google Analytics မှာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် Enterprise tools တွေလိုက်မီနေပြီ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Engage မှကြေငြာချက်များအရ On-the-fly အစီရင်ခံစာတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အပိုင်းကို Webtrends မှပင်စဉ်းစားသည်ဟုမထင်ရ။ သင်၏အစီရင်ခံစာတွင်အတိုင်းအတာအသစ်တစ်ခုထည့်သွင်းလိုပါသလား။ လွန်ခဲ့သော ၄-၅ နှစ်တာကာလအတွင်းသူကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နေသည့်တူညီသောမျက်နှာပြင်ကိုကိုင်တွယ်နေဆဲဖြစ်သောသင်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားဆက်သွယ်ပါ။ ထို့နောက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သို့မဟုတ်ရှေ့ဆက်မည့်အစီရင်ခံစာများတွင်ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ပါ။ မက်ထရစ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းတွင် Omniture တွင်ထည့်သွင်းခြင်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး၎င်းသည် ပို၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိတော့မည်ဟုထင်ရသည် - back-end တိုးတက်မှုကြောင့်။
ဗားရှင်း ၁၅ ရှိ SiteCatalyst သို့ Omniture ၏တိုးတက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုပြည့်စုံသောစာရင်းအတွက် Adam Greco ၏ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ http://adam.webanalyticsdemystified.com/2011/03/09/welcome-to-sitecatalyst-v15/
စာအုပ်ကို၎င်း၏အဖုံးဖြင့်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းမပြုရန်သတိရပါ။ Webtrends တွင်လှပသော landing page dashboard ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။
Webtrends ၏လူမှုရေးနှင့်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှု? ယခု sh * t ကိုအေးမြပါ!
ဧပြီ 9, 2011 မှာ 12: 46 pm တွင်
Webtrends နှင့် Omniture အကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာဒေတာသိမ်းဆည်းထားပုံဖြစ်သည်။ Webtrends တွင်သင် logfiles များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးအစီရင်ခံစာအချက်အလက်များကိုကျောင်းဟောင်းအဟောင်းဖိုင်များတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
Omniture တွင်အချက်အလက်များကို relational DB တစ်ခုတွင်သိမ်းထားသည်။ ဤနည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံးတွင်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အားသာချက်များရှိသည်။
၁။ webtrends တွင်သင်၏အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်သည်။ ဤသည်နည်းလမ်းများစွာအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏တည်ဆောက်ပုံကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အစီရင်ခံစာအသစ်များတည်ဆောက်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည်စိတ်ကြိုက် parameters များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားခြင်းမရှိပါကအချိန်ပြန်ကြည့်နိုင်သည်။ ဂန္ထဝင်တစ်ပုဒ်မှာစာမျက်နှာကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့် ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဥပမာအရာများစွာသည်၎င်းကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးဝင်သနည်း။ သို့သော် Webtrends သည် relational DB တွင်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်သင် db live နှင့်“ Query” ကိုသင်အလိုရှိရာတိုင်းနှင့်မရနိုင်ပါ။ သငျသညျအစီရင်ခံစာတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရှိသည်။
၂။ Omniture တွင် relational DB ကိုသင်သုံးသောကြောင့်သင်သည်ဒေတာများကို“ စုံစမ်း” နိုင်သည်။ ဒါက Discovery VS Site Catalyst ကိုတိုက်ရိုက်ခွဲထုတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်။ မရပါ။ ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်ခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲပြီးသင်ပစ္စည်းများကိုအချိန်မီပြန်လည်တိုင်းတာရန်ခက်ခဲနေသည်၊ သင်မတပ်ဆင်ထားသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ relational DB တွင်လည်းဒေတာဖိုင်ကြီးများမည်မျှကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် (ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည် Omniture ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုအမှားပြင်ဆင်ပါ) ထောင်နှင့်ချီသောလည်ပတ်မှုများအထက်တွင်သွားသောအခါရူးသွပ်သောရှာဖွေမှုကိုရှောင်ရှားရန် Omniture သည်“ နမူနာများ” ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြိမ်။ ဒေတာနမူနာတစ်ခုမဟုတ်ဘဲအတိအကျကိုသင်ရလိုသည့်အခါ၎င်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ Live segment သည်အမှန်တကယ်အလွန်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သည်။ Segment များကိုဝယ်ယူသောအခါ Webtrends သည် Webtrends ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကဏ္theများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်စေရန်ပြုလုပ်ပေးစေလိုသည်။
အခြေခံအားဖြင့် Live segment အားလုံးသည် cookie ID များစာရင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အစီရင်ခံစာများကိုစစ်ထုတ်သည်။ Webtrends Analytics သည် relational DB မဟုတ်သောကြောင့် Analytics 10 တွင်၎င်းကိုအလွယ်တကူအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည် segment များမှမည်သည့် user segment ကိုမဆို Webtrends ရှိမည်သည့်အစီရင်ခံစာအတွက်မဆိုစစ်ထုတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တကယ်တော့သင်အဲဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသင်ရွေးချယ်သော Segmentt ကိုတင်ပို့ရန်နှင့်၎င်းတွင်ရှိသော cookie ID များပါသော filter တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်၎င်းကိုပါ ၀ င်ရန်သာ filter အဖြစ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်နှစ်ခုစလုံး setup ၏အကောင်းအဆိုး cons ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပြီး၊
ဧပြီ 11, 2011 မှာ 5: 18 pm တွင်
Webtrends Visitor Data Mart နှင့်သင်သိလျှင်သေချာသည် - ၎င်းသည်ပြားချပ်ချပ်ဖိုင်များကို Analytics မှ Ad-hoc queries များသို့မဟုတ် Segments interface မှတဆင့် on-the-fly segmentation အတွက်သုံးနိုင်သည့် relational database သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ ငါနှိုင်းယှဉ်နိုင်လျှင် Google Analytics နှင့် Site Catalyst ရှိအစိတ်အပိုင်းများထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ Visitor Data Mart သည် Analytics ၏“ add-on” ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်တွင်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်တစ်ခု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစသည်တို့ရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်သတင်းပို့ခြင်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးသောပြားချပ်ချပ်ဖိုင်များ (ဥပမာ - နမူနာယူခြင်းမရှိ) နှင့် relational database ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ segment နှင့်အခြား "On-line ကို" တာဝန်များကို။
ဧပြီ 23, 2011 မှာ 4: 39 pm တွင်
VDM & Segments များကိုကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်းသိပါသည်။ သို့သော် Analytics သို့ပြန်သွားသောတံတားကိုမူတည်ဆောက်ရန်မဖြစ်သေးပါ။ သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းအခြေအနေများ၊ သင်၏လမ်းကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုလေ့ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအပိုင်းများနှင့် Webtrends Analytics မှအပိုင်းများနှင့် VDM တွင်သတ်မှတ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ယနေ့ကြည့်ရှု။ မရပါ။
အမှန်တကယ်တွင်၊ အထူးသဖြင့်အပိုင်းအစများမှ cookie IDs စာရင်းပေါ်အခြေခံပြီးစစ်ထုတ်ခြင်းကိုရိုးရှင်းစွာထည့်ခြင်းဖြင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုအလွယ်တကူတည်ဆောက်နိုင်သည်။ သင်သည် VDM & Segments တွင် Segment တစ်ခုကိုတည်ဆောက်သည်ဟုယူဆကြပါစို့။ ဤအစိတ်အပိုင်းသည်နှစ်စဉ် ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၁၀၀.၀၀၀ ကျော်ရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ င်ရောက်လာသူဖြစ်သည်။ သို့သော်ပင်စင်သဘောတူညီချက်မရသေး။ ပြီးခဲ့သည့်ရက် ၃၀ အတွင်းအပိုပင်စင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြော်ငြာကိုနှိပ်ပါ။
သင်ဤ segment သည်မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုပိုနှစ်သက်သည်၊ ဖောက်သည်၏ flash profiler ကိုမည်ကဲ့သို့ဖြတ်သန်းသည်၊ သူတို့၏ web bank interface မှမည်သည့်နေရာမှထွက်သွားသည်ကိုသင်ကြည့်ချင်သည်။ အခုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သင်သည် Segment ကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုအပိုင်းကို Analytics တွင်စစ်အဖြစ်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်မှာအထူးသဖြင့် segment ၏ Cookie ID မ်ားကို Segments မှတင်ပို့ပြီး filter နှင့် voila အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အစီရင်ခံစာများကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
ငါဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကငါထပ်ထည့်မယ်လို့အဓိကအင်္ဂါရပ်ဖြစ်တယ်။ အပိုင်းတွေဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုပဲ။ သို့သော်သင်သည် segment ကိုသင်၏ analytics platform သို့ပြန်ယူရန်လိုအပ်သည်။
မတ်လ 14, 2011 မှာ 1: 20 AM
ဒီတော့ပိုကောင်းတဲ့ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုအနီးကပ်ကြည့်လိုက်ရင် WebTrends ဒီဇိုင်နာများကဒီအဖွင့်ဖန်သားပြင်တွင်ဘာရှိမလဲဆိုတာကိုပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤဖန်သားပြင်များကိုသာစီမံခန့်ခွဲမှုသို့တင်ပြရန်သာရှိလျှင်၊ WebTrends သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆွေးနွေးမှုများကိုချွတ်ပြီးနောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်ပိုမိုတိကျသောမေးခွန်းများဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။
WebTrends သည်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာထင်မြင်စေနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ပျမ်းမျှစီမံခန့်ခွဲမှုလူတစ်ယောက်ဟာအချက်အလက်ကောင်းတွေလိုပဲခေတ်မှီတဲ့ interfaces တွေလိုပဲနိုးနေတယ်လို့ငါပြောရဲလား။
မတ်လ 14, 2011 မှာ 1: 21 AM
Hmm၊ ဒီဒုတိယမှတ်ချက်ကဒီပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ချက်အထက်မှာပြသထားတယ်။ ၎င်းတို့ကိုအောက်ခြေမှအထက်သို့ဖတ်သင့်သည်။
မတ်လ 18, 2011 မှာ 5: 26 pm တွင်
သင် Webtrends ကိုစွပ်စွဲ။ မရနိုင်သောအရာတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မရှိခြင်း။ ဒါဟာအမြဲတမ်းအများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် tool ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
Omniture က ATM စက်ကိုဆုံးရှုံးနေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
သငျသညျအပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု 10 ပိုမိုတွေ့နိုင်ပါသည် http://www.Webtrends.com/analytics10